Shiinaha Fused Silica Soo-saare iyo Soo-saare | Dinglong
Ciideheena silica ee isku dhafan waxaa laga sameeyay silica daahir ah. Xagga daahirnimada 99.98%, ciiddeena silica ee isku dhafan ayaa ah kuwo aan dabka, nadaafadda, u adkaysan karin UV, iyo xoqida. Waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan oo cabbirka walxaha ah waxaana sidoo kale loo habeyn karaa qeexitaankaaga.
Kimistari heer sare ah marka loo eego wasakhda ugu yar - taasoo keentay xoog kulul
Waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo cabbirka walxaha ah waxaana sidoo kale loo habeyn karaa qeexitaankaaga
Warshadaha la Adeegsaday laguna Amaanay
Dinglong sands silica sands waa miro la farsameeyay oo loogu talagalay isticmaalka macdanta, diidmada, tuurista maalgashiga, elektaroniga iyo codsiyada kale ee gaarka ah. Midhadhkan silica ah ee la isku daray ayaa laga sameeyay silica nadiif ah oo sarreeya, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada isku dhafka korantada si loo hubiyo tayada ugu sareysa. Hadhuudhkeenna silica ah ee la shiiday waa mid aan firfircooneyn, waxay leedahay xasillooni kiimikaad oo aad u fiican waxayna leedahay hanaan koronto oo aad u hooseysa.
Dinglong sands silica sands waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo cabbirka walxaha iyo sidoo kale loo habeyn karaa faahfaahintaada. Maadaama macaamiisha kaladuwan ay leeyihiin shuruudo kala duwan oo ku saabsan baahidooda, waxaan ku martiqaadeynaa weydiimaha faahfaahinta cabbirka gaar ah. Dinglong sands silica waxaa lagu heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Midhadhkan silica ah ee la isku daray waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hore: Waxyaabaha Sifeynta Silicada Fused
Xiga: Firidh Silica Fused